Warshadda xaashida Aluminium - Shiinaha Aluminium -saareyaasha, Alaab -qeybiyeyaasha
Xaashida aluminiumka 1050 ayaa si weyn loogu isticmaalaa warshadaha guud, tijaabada sayniska, warshadaha kiimikada iyo dhulal kale. Codsiga gaarka ahi waa sida soo socota: baahiyaha maalinlaha ah, qalabka nalalka, laambadaha iyo faynuusyada, gariiradda cuntada ka soo baxda; qashinka, magacyada, qurxinta; weelka warshadaha kiimikada, warshadaha kiimikada iyo soosaarka, fin qaboojinta, elektarooniga
2024 5083 6063 7075 Aluminum Alloy Plate
Iyada oo ay ugu wacan tahay alaabada ceeriin ee kala duwan ee taarikada aluminium, saxanka xaashida aluminiumka ayaa si qumman loogu qaybin karaa xaashida aluminium saafi ah iyo saxanka daawaha aluminium. Waxaa jira 8 darajo oo aluminium ah, fasalka koowaad waa xaashi aluminium saafi ah halka 3 darajo kale ay yihiin saxan daawaha aluminium. Qalabka saxanka aluminiumku wuu ka duwan yahay, hantida, shaqada iyo arrimo kale dabcan way kala duwan yihiin.
1100 1050 1090 3003 5052 Gariiradda Aluminium
Ka sokow noocyada kala duwan ee dhalooyinka aluminium, astaamaha alaabada aluminiumku sidoo kale waa arrimo muhiim ah, gaar ahaan astaamaha farsamada ee aluminium aluminium. Tijaabinta wax -qabadku waa qayb muhiim ah oo ka shaqaysa habaynta aluminiumyada caamka ah. Marxaladani waxay baaraysaa farsamooyin iyo farsamooyin kala duwan ee alaabada daawaha aluminium.
Waxaan caadayn karnaa cabbirkaaga.
Xaashida Guddiyada Aluminium ee la jajabiyey / ACP
Aluminium-ka samaysan aluminium (ACP), oo ka samaysan walxaha isku-dhafan ee aluminium (ACM), waa goleyaal fidsan oo ka kooban laba go 'oo khafiif ah oo daboolan oo aluminium ah oo ku xidhnaa udub-dhexaad aan aluminium ahayn. ACPs waxaa badanaa loo adeegsadaa xirashada dibadda ama wajiyada dhismayaasha, dahaarka, iyo calaamadaha.
Cabbirka Stantard ee ACP:
1220 (balac) x2440 (dherer) x3 mm (dhumuc)
1220 (balac) x2440 (dherer) x4 mm (dhumuc)
Dhumucda maqaarka Aluminium: 0.50mm, 0.40mm, 0.30mm ~ 0.06mm
Ballaca La Heli Karo: 1220 mm, 1250 mm, 1500mm, 1570mm (ugu badnaan)
Dhererka la heli karo: dherer kasta ilaa 6000mm
Dhumucda guddigu: 2mm 3mm 4mm
Awoodda Hooseysa 1100 H14 Xaashida Aluminiumka 0.2mm-30mm Mill Dhammee Xaashida Aluminiumka
Daawaha 1100 waa daawaha aluminium xoog yar oo leh iska caabin daxalka aad u fiican. Darajadani waxay ugu fiican tahay in loo isticmaalo alxanka, dajinta iyo alxanka laakiin waxay leedahay farsamo xumo. 1100 saxan aluminium aluminium wuxuu leeyahay awoodo dhameystir oo aad u wanaagsan sidaa darteed waa xulasho weyn oo loogu talagalay ujeedooyinka qurxinta.